Beauty & Health | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : flower.cherry6 - Wednesday, December 9. 2009
Categories : Beauty & Health , Comments :2Comments
Defined Tags : Beauty & Health
အဆီထွက်များသော ဆံကေသာအမျိုးအစား - Greasy Hair
Author : kyawkyaw2 - Tuesday, September 8. 2009
အဆီအထွက်များတဲ့ ဆံပင်အမျိုးအစားတွေဟာ အများအားဖြင့် ဦးရေပြားအောက်က အဆီကျိတ်ဂလင်းကနေ အဆီထုတ်လုပ်မှု များခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုစားလို့မရပေမယ့် ပြုစု ထိန်းသိမ်းတဲ့နည်းနဲ့တော့ တားဆီးလို့ရပါတယ်။ ဆီအထွက်များရတဲ့ အကြောင်းရင်း အဓိကအချက်နှစ်ချက်
Categories : Beauty & Health , Comments : 17 Comments
Author : kyawkyaw2 - Thursday, September 3. 2009
"အစားအသောက်များသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အမြဲကောင်းပါသလား။" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ရပ် ကို ၁၅၊၈၊၂၀၀၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊သိမ်ဖြူလမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း (ဗဟို) ခန်းမဆောင်(အေ)၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Categories : Beauty & Health , Comments :
Author : sky net - Saturday, July 18. 2009
Categories : Beauty & Health , Comments : 1 Comment
Author : ညတစေ - Wednesday, April 4. 2007
Author : kyawkyaw2 - Saturday, March 24. 2007
အခုတစ်လော ရန်ကုန်မှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးဖြစ်တယ်ကြားလို့ စာစောင်တွေမှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဖတ်ကြည့်တာ ဒီအင်တာ
ဗျူးလေးကို သဘောကျတာနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Categories : Beauty & Health , Comments : 14 Comments
ရှားပါးသော အသားစား Vibrio ဘတ်တီးရီးယား
Author : May15 - Thursday, March 22. 2007
ဗုဒ္ဒဘာသာရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ကံ၊ကံ၏အကျိုးပေးလို့ပဲ ဆိုရမှာပဲ။
Categories : Beauty & Health , Comments : 19 Comments
မြန်မာနှင့် ထိုင်းနယ်စပ်မှာ မြူခိုးတွေ အုံ့ဆိုင်းနေပါတယ်
Author : May15 - Wednesday, March 21. 2007
NEA ရဲ့မြေပုံအရ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မြောက်ပိုင်း Sumatra တွေဟာ အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
Author : kyawkyaw2 - Saturday, March 10. 2007
Categories : Beauty & Health , Comments : 28 Comments
Author : kyawkyaw2 - Friday, March 9. 2007
ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာစောင်ထဲက သိချင်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ချို့ကို ရေးပေးပါဦးမယ်။ ဆံပင်နက်အောင် အိမ်မှာပဲနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်း၊Indiaအနှိပ်ပညာမှ စိတ်ဝင် စားစရာ၊ ကော်ဖီ ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်သလည်း မျက်လုံးအားပြန်ကောင်းပြီး မျက်မှန်လွတ်တဲ့နည်းစသဖြင့်ပေါ့။
Categories : Beauty & Health , Comments :4Comments
Author : kyawkyaw2 - Wednesday, March 7. 2007